Ithegi: ukupakisha | Martech Zone
Ukupakishwa kweMveliso kuchaphazela njani amava oMthengi
NgoLwesithathu, nge-18 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
Usuku endathenga ngalo iMacBook Pro yam yokuqala yayiyinto ekhethekileyo. Ndiyakhumbula ndiziva ukuba ibhokisi yakhiwe kakuhle kangakanani, ukuba ilaptop iboniswe kakuhle, indawo yezixhobo… konke kwenzelwe amava okhethekileyo. Ndiyaqhubeka nokucinga ukuba iApple inezinye zezona mveliso zibalaseleyo zokupakisha kwimarike. Ngalo lonke ixesha ndibhokisi ngaphandle kwazo naziphi na izixhobo zabo, ngamava. Ngapha koko, kakhulu kangangokuba
Iziphumo zokuPakishwa kwesiko kuThengiso lwakho lwe-Ecommerce?
NgoLwesihlanu, Februwari 19, 2016 Lwesine, ngoFebruwari 18, 2016 Douglas Karr
Enye yeepakeji zokuqala endakha ndazivula ezazibalulekile yayiyiMacBookPro yokuqala endayithengayo. Kwakungathi kukutyhilwa njengoko ndavula ibhokisi yesutikheyisi kunye neelaptop kunye nezixhobo ezifakwe kakuhle ngaphakathi. Yayilolona tyalo mali lukhulu, kwaye uyayibona inkathalo eyenziwa nguApple ukuqinisekisa ukuba ndiyazi ukuba ikhethekile njengokuba ndivula ibhokisi. Umntu endisebenza naye usebenza kubuhle